पल शाह प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईले पनि दिए यस्तो प्रतिक्रिया !
नायक पल शाह प्रकरण्मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि मुख खोलेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले पल शाह प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै न्यायिक फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले ‘मर्दकी दशवटी’ भन्ने मानसिकता बोकेर पीडकको पक्ष लिनु लज्जास्पद भएको भन्दै उनले ट्वीटरमार्फत टिप्पणी गर्दै न्यायिक फैसलाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा पल शाह पक्षधरको दिनहुँ भइरहेका प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहँदा भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।
यस प्रकरणमा मानवअधिकारवादी, सेलिब्रेटी र सार्वजनिक वृत्तबाट समेत भनाइहरु बाहिर आएका छन् । एक नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पल शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन् । उनलाई अदालतले अभियोगबारे बयान लिइरहेको छ ।
नायक पल शाह बलात्कार आरोपमा अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । शाहले बलात्कार गरेको आरोप लागेको पीडित नाबालिग रहेको खुलासा भएको छ ।
प्रहरीले प्राप्त गरेको पीडितको जन्म दर्तामा उनको जन्म मिति २०६२ साउन रहेको खुलेको छ। सो जन्म मिति अनुसार २०७८ साउनमा उनी १६ वर्ष पुगेको देखिन्छ।
घटनाको समयमा उनको उमेर १५ वर्ष देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा उमेर पहिल्याउने प्रमुख प्रमाण जन्म दर्ता नै हो।
जन्म दर्ताको आधारमा घटनाको समयमा उनको उमेर १६ वर्ष भन्दा कम देखिएको र अनुसन्धानमा हेर्ने भनेको जन्म दर्ता नै रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रहरीले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिसकेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा नाबालिगको कन्या जाली च्यातिएको स्वास्थ्य प्रतिवेदन आइसकेकाले आरोपी विरुद्ध दुवै प्रमाण बलियो रहेको एक प्रहरीले जानकारी दिए।
तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका पलले प्रहरी बयानमा भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले पीडित परिचित रहेको र सँगै म्युजिक भिडियो खेल्नेक्रममा एकै होटलमा बसे पनि बलात्कार भने नगरेको दाबी गरे पनि दुवै प्रमाण उनी विरुद्ध देखिएको छ।
नाबालिग गायिकाले पल विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएपछि पाँच दिन लुकेर उनी आइतबार प्रहरी कार्यालय पुगेर सरेन्डर गरेका थिए। प्रहरीले सात दिनको अनुमति लिएर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अनुसन्धानमा घटनास्थलको मुचुल्का, बयान लगायतको प्रक्रिया जारी रहेको अनुसन्धानस्रोतले बतायो। प्रहरीले प्रमाण बुझ्ने काम समेत जारी राखेको छ।